Pakistan - Kaalmo Helitaan Caalami ah
EAI waxay mashruuckeedii ugu horreeyay ka fulisay Pakistan 2008-dii, iyada oo ka shaqeysa hadda la isku daray ee Khyber Pakhunkhwa (KP) iyo Aagagga Qabaa'illada Federaaliga ee Maamulka (FATA) gobollada waqooyiga dalka ee xadka la leh Afghanistan.
Shaqaalaheena aqoonta sare ee maxalliga ah waxay si khibrad leh u fuliyeen mashaariic diiradda saaraya dulqaad, xorriyadda diinta, waxbarashada, sinnaanta ragga, ka hortagga xagjirnimada rabshadaha, ka qeybgalka bulshada, iyo dowlad hufan. Waxaan soo saarnaa agabno iyo agab tababareed Urdu iyo Pashto iyo, markii ay suuragal tahay, lahjado kale. Waxaan ka shaqeynaa qaar ka mid ah arrimaha xasaasiga ah ee meelaha fog fog ee Pakistan, si guul leh waxaan ugu darsanaynaa qaab dhismeedka ka qeybqaadashada madaniga ah sida shirarka Hujra oo ay ku jiraan kuwa saameyn ku leh gudaha iyo hogaamiyaasha. Waxaan ku biirineynaa warbaahinta dhaqameed, oo ay kujirto tiyaatarka wadada, tartamada isboortiga, gabayada, iyo muusikada raadiyaha, tikniyoolajiyadda is-dhexgalka, filimka, iyo telefishanka, oo awood u siineysa inaan ka mid noqonno dhammaan xubnaha bulshada barnaamijyadayada.
Xoojinta awoodda u doodista xuquuqda aadanaha ee haweenka laga tirada badan yahay ee Pakistan. 2018-xaadir
Hindisaha Xuquuqda Haweenka ee ku saleysan Xuquuqda Iimaanka ee Pakistan
Waxaa soo saaray 'EAI' ee Baakistaan, "Bawar" (Trust) wuxuu sheegayaa sheekada xoogga leh ee haweenka da 'yarta ah, Paghunda iyo ardayda dhigata kuliyadaha, Palwasha, kuwaas oo la dagaallama sinnaan la'aanta iyo nacaybka qoysaska aabbayaashood ay u leeyihiin aabayaasha.
Pakistan, Sanduuqa Nabadda iyo Amniga Caalamiga
Bawar: Waa Filim kusaabsan haweenka geesiyaasha ah ee reer Pakistaan ​​ee u halgamaya waxbarashadooda
Barnaamij isbedel dabeecad bulsheed oo firfircoon iyadoo la adeegsanayo tiyaatarka, filimka, raadiyaha iyo dadaallada hoggaaminta bulshada, si loo hormariyo xuquuqda haweenka iyo gabdhaha ee Pakistan oo dhan.
Kor u qaadista sinnaanta jinsiga iyo awoodsiinta gabdhaha ee Pakistan
Filimka 'EAI' ee filimka 'Bawar,' haweenka geesinimada leh waxay u dagaallamayaan waxbarashadooda Pakistan
Marka laba gabdhood oo da 'yar ah Pashtun ay u dagaallamaan xuquuqdooda waxbarasho ee bulsho qoto-dheer oo muxaafid ah iyo aabbayaal, ficilladoodu waxay hanjabayaan amarkii hore, cawaaqib xumo.
Masraxa socdaalka ayaa khalkhal geliya aagagga qabaa'ilka ee Pakistan fariimaha nabadda
Masraxa safarka ah wuxuu bedelaa sheekada in kabadan 50,000 dhalinyaro Pakistaan ​​ah oo ku nool gobolka FTA iyo KP.
Ka taageer EAI sidii loo naaqusi lahaa saameyntayada iyo u halganka sinnaanta iyo marin u helka Pakistan oo dhan.